FAQs - शंघाई Chigong औद्योगिक कं, लिमिटेड
SCIC एक निर्माता हो?
हो, SCIC 30 बर्ष भन्दा बढी को लागी चिनियाँ बजार को सेवा को रूप मा खनन र औद्योगिक उठाने र धांधली आवेदन मा विदेशी बजार को लागी एक गोल लिंक चेन निर्माता हो। हामी अब SCIC स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटि enhance बढाउन ग्राहकहरु लाई राम्रो सेवा र व्यावसायिकता संग विश्वव्यापी प्रदान गर्न को लागी।
SCIC उत्पादन र आपूर्ति को क्षेत्र के हो?
हामी कोइला खानी उद्योग बख़्तरबंद अनुहार कन्वेयर (AFC), बीम स्टेज लोडर (BSL), सडक हेडर मिसिन, साथै फ्लैट लिंक चेन को लागी उच्च ग्रेड र बल को गोल लिंक चेन बनाउन मा विशेषज्ञता; हामी ग्रेड ,०, ग्रेड and० र ग्रेड १०० चेन उठाउने र धांधली (चेन slings), बाल्टी लिफ्ट र माछा मार्ने उद्योग को लागी बनाउँछौं।
के तपाइँ पूर्ण इनहाउस परीक्षण र निरीक्षण सुविधा र उपायहरु कायम राख्नुहुन्छ?
हो, हामी विनिर्माण बल परीक्षण, ब्रेकिंग फोर्स टेस्ट, charpy V notch प्रभाव परीक्षण, झुकाउने परीक्षण, तन्यता परीक्षण, कठोरता परीक्षण, गैर विनाशकारी परीक्षा (NDE), म्याक्रो परीक्षा र सूक्ष्म परीक्षा, परिमित तत्व विश्लेषण, आदि सहित इनहाउस परीक्षण बाहिर ले। , दीन 22252, दीन एन 818 मानक र ग्राहक को आवश्यकताहरु को अनुसार।
के तपाइँ ODM र OEM बनाउनुहुन्छ?
हो, हाम्रो स्वचालित र robotized मिसिनहरु र अनुभवी ईन्जिनियरहरु संग, हामी ग्राहकहरु को विशिष्टताहरु को लागी ODM र OEM गोल लिंक चेन बनाउन सक्छौं
के तपाइँ न्यूनतम आदेश मात्रा (MOQ) छ?
पहिलो पटक अर्डर गर्ने ग्राहक को लागी, त्यहाँ कुनै MOQ आवश्यकता छैन, र हामी ग्राहक को परीक्षण को उपयोग को लागी लचीला मात्रा आपूर्ति गर्न खुशी छौं।
तपाइँको श्रृंखला परिष्करण / कोटिंग के हो?
हामी ग्राहकहरु को आवश्यकताहरु प्रति विभिन्न रंग कोटिंग्स, साथ साथै galvanization र अर्डर वार्तालाप प्रति परिष्करण को अन्य साधन प्रदान गर्दछ।
तपाइँको चेन प्याकेजि means्ग को मतलब के हो?
हामी जम्बो झोला, ड्रम, pallets, इस्पात फ्रेम, आदि सहित विभिन्न प्याकेजि means्ग साधन, प्रस्ताव।
तपाइँको गुणस्तर आश्वासन र ग्यारेन्टी के हो?
हामी निर्माण को समयमा र वितरण अघि डिलीवरी मा रिलीज पुष्टि गर्न को लागी ग्राहक को समीक्षा को लागी पूर्ण परीक्षण रिपोर्ट र फोटो जारी गर्दछौं। हाम्रो राउन्ड लिंक चेन सेवा को दौरान कुनै असफलता को मामला मा, हामी सकारात्मक असफलता विश्लेषण (retest सहित) ग्राहकहरु संग पारस्परिक समझ र स्वीकृति को कारण र उचित संकल्प निर्धारण गर्न को लागी सहयोग गरिनेछ।